Ziva izvo zvitsva muApache NetBeans 11.2 uye maitiro ekuiisa pane Linux | Linux Vakapindwa muropa
Ziva izvo zvitsva muApache NetBeans 11.2 uye maitiro ekuiisa pane Linux
La Apache Software Foundation ichangobva kuzivisa kuburitswa kweshanduro nyowani ye yako yakasanganiswa nzvimbo yekuvandudza yeiyo Apache NetBeans 11.2. Iyi iri yechina vhezheni yakagadzirirwa neApache Foundation mushure mekuchinjiswa kweNetBeans kodhi naOracle uye yekutanga vhezheni mushure mekuendeswa kweprojekiti kubva kuApache incubator.
Kune avo vachiri ivo havazive nezveNetBeans, vanofanirwa kuziva kuti ino inzvimbo yemahara yakasanganiswa yekusimudzira, waita kunyanya yemutauro weJava programming uye kuti zvakare ine akakosha manhamba emamojuru ekukuwedzera.
NetBeans inobudirira kwazvo yakavhurwa sosi projekiti ine hombe mushandisi base, nharaunda inogara ichikura.
1 NetBeans 11.2 Main Zvitsva Zvimiro
2 Maitiro ekuisa NetBeans 11.2 paLinux?
NetBeans 11.2 Main Zvitsva Zvimiro
Nekuburitswa kweiyi nyowani vhezheni yeNetBeans 11.2 zvitsva zvemutauro wePHP zvakawedzerwa, yakagadzirwa mubazi 7.4. Zvakare kuwedzerwa kwezvinhu zvakanyorwa kunoratidzwa. anoshanda "?? = », kugona kutsiva matrices aripo pakutsanangura nyowani, nzira nyowani yekuisa serializing zvinhu, kugona kuratidza nhamba hombe, uye fomati nyowani yekutsanangura mabasa.
Imwe shanduko inomira kubva kuNetBeans 11.2 ndiyo tsigiro ye Java SE 13. Semuenzaniso, kugona kushandisa «chinja»Mune chimiro chekutaura panzvimbo peanoshanda.
Se shandisa kuratidza nekushandura mashandiro emavara ezvinyorwa Ivo vanosanganisira akawanda-mutsara zvinyorwa zvemanyoro pasina kushandisa hunhu kupunyuka uye kuchengetedza iyo yekutanga mameseji fomati. Iwo maficha akanyorwa kusvika parizvino akaratidzirwa seyedzo uye anoshandiswa chete panguva yekuungana pamwe ne "- inogoneka-preview" mureza;
Uyewo akasiyana maitiro ekugadzirisa akajekeswa: Yekumhanyisa yekutsvaga kwemabhainari mafaera mumuti aine zvinyorwa zvinyorwa akawedzerwa.
PaLinux neWindows, iyo WatchServic interfacee yakapihwa ne Java NIO2 API inoshandiswa kuteedzera shanduko mumadhairekitori, pamwe nekukurumidza faira-ku-faira chitupa.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweGradle kuvaka system. Wakawedzera kugona kurodha Java muunganidzi mureza, zvichikubvumidza iwe kushandisa ekuyedza Java maficha muGradle mapurojekiti.
Zvakare akawedzera kugadzirisa kweanoshandisa mushandisi pane tebhu, kuratidza kufambira mberi kwegungano (Kubuda). Kana uchitanga iyo Gradle Daemon kumashure maitiro, iyo org.gradle.jvmargs chivakwa zvino chave kutarisirwa.
Maitiro ekuisa NetBeans 11.2 paLinux?
Kune avo vanoda kuwana iyi nyowani vhezheni yeNetBeans 11.2 Vanofanira kunge vaine zvirinani iyo Java 8 vhezheni yeOracle kana Vhura JDK 8 yakaiswa pane yavo system uye Apache Ant 1.10 kana yepamusoro.
Uyewo kune dzimwe nzira dzekuisa iyo yavanogona kutsigirwa nayo, imwe yacho iri nerubatsiro rweSnap mapakeji.
Ivo chete vanofanirwa kuve nerutsigiro kuti vakwanise kuisa aya marudzi emapakeji pane yavo system. Kuisa nenzira iyi, unofanirwa kunyora unotevera kuraira:
Imwe nzira ndeye nerubatsiro rwePlppak mapakeji, saka ivo vanofanirwa kuve nerutsigiro rwekuisa aya mapakeji pane yavo system.
Iwo wekuraira kwekumisikidza uri unotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Ziva izvo zvitsva muApache NetBeans 11.2 uye maitiro ekuiisa pane Linux
Red Hat Enterprise Linux 8.1 Yakaburitswa Pamutemo Neaya Matipi Matsva